5 buug oo ku saabsan dumarka ayaa la daabacay sanadkii ugu dambeeyay | Bezzia
Maria vazquez | 08/04/2021 12:00 | Wararka
Bil kasta Bezzia waxaan ku soo aruurino qaar ka mid ah wararka suugaanta si aad dhammaantiin u wada heshaan midka kaa dhigaya inaad ku raaxaysato raaxada akhriska. Sababta oo ah kuweena had iyo jeer gacanta ku haya buug, akhrisku waa wax lagu farxo, xitaa marka aqrisku ku raaxeysto. Sababtoo ah inkasta oo aan raaxo lahayn waxaa jira shaqooyin lagama maarmaan ah iyo codadka xiisaha leh in la maqlo. Shaki nagagagagama jiro in shantaan buug ee kusaabsan dumarka inay ka tirsanaan doonaan kooxdaas.
1 Haweennimo. Hordhac kooban oo ku saabsan fikirka siyaasadeed
2 Dumarka firfircoon
3 Dumarka islaamka
4 Haweenka dagaallama way kulmaan
5 U arag sida haweeney
Haweennimo. Hordhac kooban oo ku saabsan fikirka siyaasadeed
Qorayaasha: Jane Mansbridge iyo Susan M. Okin
Daabace: Bogga Indómita
Muggan, laba ka mid ah aqoonyahannada ugu caansan ee dumarku waxay soo koobayaan shaqooyinkii ay labadaba ku daabaceen arrinta iyo dib u eegid ku darsadaan fikradaha iyo fikradaha dheddigga kala duwan. Waxaa hagaya dhexdhexaadnimo iyo qiime dhexdhexaadnimo oo aad iyo aad muhiim ugu ah maanta arimahan iyo kuwo kale oo badan, qorayaashu waxay na tusayaan qodobbada guud iyo kala qaybinta khadadka kala duwanaanta dumarka waxayna iftiiminayaan fikirka siyaasadeed ee qaatay doorka weyn. dhinaca bulshada.
Qoraa: Ana Requena
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwii jabinta aamusnaanta: adduunka oo dhan kumanaan haween ah ayaa la wadaagay waayo-aragnimadooda rabshadaha iyo dhibaataynta galmada. Laakiin hadalkaas, waa lama huraan, waa inuu la socdaa mid kale: kan raaxada dumarka. Iyadoo ay la soo deristay cabsi galmo, haweeneydu waxay miiska saareysaa rabitaanka, madax-bannaanida galmada, xuquuqda haweenku u leeyihiin inay noqdaan maadooyin jinsi iyo raaxaysi leh oo aan ahayn uun ashyaa. Wadadu ma fududa: galmada ayaa ka mid ahayd hubka aabbe ee lagu edbiyo dumarka.
Sababtaas awgeed, hadda in ka badan sidii hore, waxaan u baahanahay inaan xoojino sheeko haween ah oo noo oggolaaneysa inaan la dagaallano fikradaha fikradaha wali na culeyska keenaya, dib u dhiska rabitaanka iyo sida aan ula xiriirno, ugana guuleysanno xaqa raaxada. Waxaa laga yaabaa in taasi ay tahay sababta toy toy sida kan Qanciyayaashu ay u keenayaan dareen oo ay ka caawinayaan haweenka inay jebiyaan xaraashka ku saabsan masturbadooda. Laakiin waa inaan sidoo kale ka hadalno dhinaca kale: marar badan oo haweenku ay ku dhaqmaan xuquuqdooda rabitaan waxay la kulmaan cadaawad lab. Cirfiidnimada, quudhsiga, sugitaanka aan qiilka lahayn, aargoosiga, qanacsanaanta ama galmada oo aan lahayn xannaano daryeel ayaa ka mid ah falcelinta aan helno. Maxaa isbadalay markaa? Oo maxaan sameyn karnaa?
Qorayaasha: Asma Lamrabet, Sirin Adlbi Sibai, Sara Salem, Zahra Ali, Mayra Soledad Valcárcel iyo Vanessa Alejandra Rivera de la Fuente
Dumarka islaamku waa a dhaqdhaqaaqa dib-u-cusboonaysiinta, ruuxi iyo siyaasadeed, kaas oo ka dhashay dib ugu noqoshada ilaha Islaamka, dhismaha maanta bulshooyinka tirada badan. Si ka duwan waxa reer Galbeedka iyo awoodoodu, faafitaankooda, gumeysiga iyo mania-talisnimada ay rabeen inay muujiyaan, Islaamku wuxuu aqoonsan yahay sinnaanta jinsiga Feminism-ka Islaamku wuxuu ku saleysan yahay tarjumaadda Quraanka kariimka ah, isagoo iftiiminaya asalka bulsho iyo siyaasadeed ee takoorka ka dhanka ah haweenka, iyadoo lagu saleynayo fasiraadda aabanimo ee kitaabka barakeysan ee Islaamka.
Dareenkan, waa dhaqdhaqaaq caddaynaya doorka haweenka, oo ku saleysan mabda'a sinnaanta iyadoo la tixgelinayo ragga, oo lagu soo bandhigo dhaqankooda diineed ee dhabta ah. Doodooda ayaa ah in diinta islaamka lagu tarjumay qarniyo qarniyo awoodeed iyo hab khaldan, sidaa darteedna ay ku weecisay farriinteeda ruuxiga ah. Wax ka qabashadaani waxay dooneysaa inay sii xoojiso kala duwanaanshaha, marka lagu daro inay haweeneyda ka ilaaliso a in si siman looga wada qayb qaato dhammaan qaybaha bulshada muslimka ah.
Haweenka dagaallama way kulmaan
Qoraa: Catalina Ruiz-Navarro
Buuggan, Catalina Ruiz-Navarro, mid ka mid ah codadka ugu caansan ee dhaqdhaqaaqan Latin America, safarada, laga bilaabo markhaati qoto dheer oo daacad ah, waddo wax ka qabata jirka, awoodda, rabshadaha, jinsiga, halganka dhaqdhaqaaqa iyo jacaylka. Dhanka kale, kow iyo toban geesiyaal ah, oo ay ka mid yihiin María Cano, Flora Tristán, Hermila Galindo iyo Violeta Parra, oo ay si qurux badan u soo bandhigeen Luisa Castellanos, ayaa kor u qaaday codkooda waxayna muujinayaan in ka hadalka dumarka ay muhiim tahay, waa muhiim, waa iska caabin.
Buug-gacmeedkan oo ah Latin-ka dumarka ee pop-ka waa akhris la dhaqaajinayo, oo dhib leh, su'aalahaas; waa hagaha saxda ah ee qofkasta oo raba inuu ka hadlo waxa loola jeedo naag noqoshada aduunka.
U arag sida haweeney
Qoraa: Nivedita menon
Go'aan, xarago, iyo siyaasad ku howlan, U aragida haweeneynimadu waa buug geesinimo leh oo ballaaran. Qoraa Nivedita Menon, dumarnimadu kuma saabsana guusha ugu dambeysa ee aabanimada, laakiin waa a isbeddelka tartiib-tartiibka ah ee qaybta bulshada go'aan ka gaara qaab dhismeedyadii hore iyo fikradaha inay waligood isbedelaan.
Buugani wuxuu xaq u siinayaa adduunka iyada oo loo marayo muraayad haween ah, inta udhaxeysa khibrada la taaban karo ee ku saabsan haweenka Hindiya iyo caqabadaha waaweyn ee haweenka adduunka. Laga soo bilaabo eedeymaha dhibaataynta galmada ee loo geysto shakhsiyaadka caanka ah ee caalamiga ah ilaa loolanka siyaasadeed ee u gaarka ah dumarka, laga bilaabo mamnuucida xijaabka ee Faransiiska ilaa isku dayga ah in lagu soo rogo goonnada ciyaartoyda sida dharka qasabka ah ee tartamada caalamiga ah ee badminton, laga bilaabo siyaasadda gaagaaban ururada shaqaalaha guryaha ee ololaha Pink Chaddi, Menon Waxay si karti leh u muujineysaa siyaabaha ay haweeneydu dhab ahaantii u murugsan tahay uguna beddeleyso dhammaan qaybaha bulshada casriga ah.
Miyaad aqrisay midkoodna? Waxaan ku raaxeystay Feminism-ka Islaamka bilo ka hor, waxaan kaloo gacanta ku hayaa mid ka mid ah buugaagta ku saabsan dumarka. Sababtoo ah had iyo jeer waa wax xiiso leh in lala kulmo codad ka kala imanaya qaybaha kala duwan ee adduunka iyo dhaqammada ka duwan kuweenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » 5 buug oo ku saabsan dumarka ayaa la daabacay sanadkii ugu dambeeyay